Ny fitaovana kendrena dia manana rindrambaiko maro karazana ary nahasarika ny sain'ny olona marobe ao amin'ny indostria ho an'ny ankamaroan'ny olom-pirenena, ny foto-kevitry ny “kendrena” tsy dia mahazatra loatra. Na izany aza, indostria ao anatin'izany ny sela photovoltaic, fisehoan'ny tontonana fisaka, boriborintany tafiditra marobe, microelectronics, ary ny firakotra haingon-trano dia mitaky be dia be “lasibatra.”.ny fireneko dia lasa iray amin'ireo firenena misy fangatahana be indrindra amin'ny tanjona kendrena eto amin'ity tontolo ity.
na izany aza, hatreto aloha, fahadiovana avo lenta, avo-hakitroky, Ny tanjon'ny firavaka tungsten-titanium lehibe eto amin'izao tontolo izao dia azo amboarina any amin'ny firenena vitsivitsy toa an'i Japon, Alemaina, sy Etazonia. Betsaka amin'ireo tanjona kendrena avo lenta ampiasaina eto amin'ny fireneko no mbola mila ampidirina..
Foshan Jushitai Powder Metallurgy Co., Ltd., izay namokatra fitaovana enti-miasa nentim-paharazana, nahita ny mety an'ity tsena ity any amin'ny fireneko sy ny “fahadisoana” an'ny mpiara-miasa aminy. Koa satria 2006, nanambatra ny heriny tamin'ny Shenyang Institute of Metal Research izy io, Akademia siansa momba ny siansa, ary nanambola mihoatra ny 2,000 RMB 10,000 ho an'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny “lasibatra avo lenta”.Ao amin'ny 2009, Ny orinasa dia nahavita namorona lasitra firakotra firaka tungsten-titanium miaraka amina andiana toetra tena tsara tsy azo soloina., avo-hakitroky, fahadiovana avo lenta tungsten-titanium fitaovana kendrena firavaka novolavolaina sy novokariny dia karazan-java-kendrena firaketana ion sputtering ion vaovao, izay azo ampiasaina betsaka amin'ny sosona sakana na loko miloko amin'ny efijery fampisehoana, ny sosona haingon-trano amin'ny solosaina kahie, ary ny fonosana bateria, sns..Ny vokatra dia nandalo ny fizahana ara-dalàna an'i Etazonia, ary ny tondro teknika lehibe indrindra dia nahatratra ny takiana famolavolana, ary tonga ny haavon'ny tanjona 99% ny hakitroky ny teôria..9%, tonga ny fahadiovana 99.99%, ny haavon'ny tanjona dia tonga amin'ny ambaratonga avo lenta, nahavita nameno ny banga teto amin'ny fireneko.
Précédent: Azavao ny fahalalana ny sputtering target medium medium magnetron sputtering
Manaraka: Azavao ny vokatry ny sputtering target detitanium agents